Casho-sharaf Loo Sameeyay MW Somaliya - Cakaara News
Casho-sharaf Loo Sameeyay MW Somaliya
Jigjiga(Cakaaranews) Khamiis, 11ka August 2016. Waxaa casho-sharaf soo dhawayn ah oo si heer sare ah loo diyaariyay guriga martida ee qaryaan dhoodaan loogu sameeyay madaxwaynaha dawlada federalka soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiguu hogaaminayay.
Casho-sharaftan ayaa waxaa kasoo qaybgalay hogaaminta ugu saraysa xukuumada soomaaliya oo ay kamid yihiin madaxwaynaha dawlada federalka soomaaliya mudane Xasan Sheekh Saxamuud iyo waftiguu hogaaminayay, mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu ugu horeeyo madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar wakiil buuxana u ah raisal-wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn, afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, madaxwayne kuxigeenada, golaha wasiirada, xubno kasocday ururka IGAD, heerarka kaladuwan ee shaqaalaha xafiisyada heer deegaan, odayaal dhaqameedyo, garaado, suldaamo, dhalinyaro, hooyooyin, qurbajoog iyo marti sharaf kale.
Waxaana habeenkii xalay ahaa banaanka wayn ee guriga martida qaryaan dhoodaan ay kooxaha fanka iyo suugaanta deegaanku si aan inaba caadi ahayn ay uga tumeen dhaantooyinkii hidaha iyo dhaqanka ee uu deegaanku caanka ku ahaa oo runtii si wayn usoo jiidatay martidii soomaaliya.
Kadibna madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud ayaa madasha kusoo dhaweeyay madaxwaynaha dawlada federalka soomaaliya mudane Xasan Sheekh si uu uga soo jeediyo khudbadii uu ugu talagalay.
Madaxwayne Xasan ayaana goobtaa kasoo jeediyay khudbad qurux badan oo uu kaga hadlay isbadalka maanta kajira dawlada soomaaliya. Wuxuuna amaan balaadhan usoo jeediyay dawlada federalka ee itoobiya khaasatan dawlada deegaanka soomaalida itoobiya gaar ahaana hogaaminta deegaanka oo uu ugu horeeyo madaxwayne CMC isagoo kuladardaarmay inay sii adkeeyaan nabadgelyada taamka ah ee uu kuyimid horumarkan laxaadka leh. Wuxuuna kamahadceliyay aqoon korodhsiga iyo khibrad wadaaga ay kaheleen deegaanka oo uu sheegay inaysan ahayn in meel kale loo raadiyo.
Ugudanbayna, madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa uhambalyeeyay madaxwaynaha isagoo hambalyo iyoo bogaadina udiray dhamaan shacabka soomaaliya. Wuxuuna sheegay inay tahay taariikhda markii 1,aad ee uu madaxwayne kasocda jamhuuriyada soomaaliya booqasho kuyimaado DDSI.